Windows AeroSnap inoshanda kana Compiz Grid muXfce | Kubva kuLinux
Munguva pfupi yapfuura mushandisi akandibvunza kuburikidza netsamba kana na Xfce isu tinogona kuve nechimwe chinhu chakafanana nemhedzisiro Aerosnap de Windows, or the Compiz Grid, iyo yatinogadzirisa nayo windows iri pakati pechidzitiro nekungozvuva kumucheto kwescreen.
Zvinoitika kuti mu Archlinux AUR pane chigamba che Xfwm izvo zvinotibvumidza isu kuita chaizvo izvi (uye inoshanda kubva p% $ # amai) iyo yatinogona kuisa nekuvhura koni uye nekuisa:
Mukupedzisira, kana yapedza kuunganidza zvese, ichatiudza izvozvo xwfm4-tiling kunetsana ne xfwm, asi izvozvo hazvitifadzi. Isu tinokuudza kuti kana iwe ukaisa uye mushure mekuvhara musangano uye kupinda zvakare, tichava nemhedzisiro inotevera:
Zvakafanana kana tikadhonza kurudyi, sekuruboshwe uye kunakisa kunonakidza (Ini ndinonzwa kuburitswa, ndinofara), inoitawo kumusoro nekudzika 😀
Hora: Kana mhedzisiro isina iro zita, kana muWindows kana Compiz ndiudze ... ...
Ini ndinoda Xfce <3
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Yakurudzirwa » Windows AeroSnap kana Compiz Grid mhedzisiro muXfce
Sezvaunotaura, ndinotarisirawo kuti izvi nekukasira muna 4.10, ndakazviisa nekuti ndaifarira chimiro che windows uye ndakachitsvaga kusvikira ndachiwana che xfce, kana iwe ukatora hwindo kumusoro kana pasi rinoita zvakafanana asi rakatwasuka, izvo zvakare zvakanaka. Chingangoshaikwa (mumaonero angu) ndechekuti nekukwevera hwindo kukona inoiswa mune 2 × 2 grid, nekuti izvo zvinoonekwa kusvika ikozvino 2 × 1 kana 1 × 2 (zvinoenderana nekuti yakatwasuka here kana kuti yakatwasuka), kana zviite nehotkey.
Zvisinei, zvakanaka kwazvo uye ini ndinozvikurudzira kune vashandisi ve xfce vanoshandisa rinopfuura rimwe hwindo pane desktop kana vane yakafara uye / kana makuru monitors haha.
Uye kune gnome? grid iyo mashandisiro ayo 😐
Mmm hapana zano. Ini ndinofunga iwe uchafanirwa kushandisa Compiz yeizvozvo.
Iwe unongofanirwa kuisa CompizConfig uye mune iyo "Window maneja maneja" chikamu, tarisa iyo Grid bhokisi uye ugoisa iyo yakakosha mubatanidzwa waunoda.
Kana maneja achiibvumira ini ndinosiya Iyi link kuchinyorwa cheblogi uko kwavanotsanangudza nhanho nhanho.
Hukuru!!! Ndatenda chaizvo Elav, ikozvino Xfce yangu haina chaanoshaya.
Ndichiri kufara. Ini ndatonyorera kuiyo Xfce runyorwa kuti ndione kana ivo vachiisanganisira iko kushanda nekukasira muXfce 4.10 😀
Zvinotaridza kuti chero munhu anochengeta pasuru muAUR haasisina nguva yekuzviita
Zvinonyadzisa Kunyangwe izvozvo zvisina basa. Kuisa chigamba kunofanirwa kuve nyore 😀
Zvakanaka! damn handina Arch uye haisi muLMDE = S ... zvinoita sekunge ndichachinja pandinogona ...
Pindura kuna antolieztsu
Kana minamato yangu ikanzwiwa neve Xfce vagadziri uye ivo vachiisanganisira iyo inotevera vhezheni, iwe ingo mirira zvishoma kuti uve nayo muLMDE 😀
Ndinovimba vanoteerera iwe.
Izvi zvinotonhorera chaizvo chinhu chinonyanya kubatsira, asi shanduko shanduko Arch yeOpensuse uye ini handisi kufara 🙁
Ha! Uye nei zvakadaro?
Ini handizive murume, nguva pfupi yadarika ndakava nechishuwo chekuenda kuyedza zvese zvandiri kufunga zvekushandisa kwechinguva chakra, haizotorwe uye kana zvisiri ndichadzokera kuArch.
Ndeipi theme yaunoshandisa kudesktop?
Musanganiswa weBluebird + Zukitwo wandakaita unonzi ZukiBird 😀
Zvakanaka, zvaisazove zvakaipa kana iwe ukazvigovana, nekuti ini handina kuona iri nani kune xfce. Nenzira, unoshandisa ubuntu sosi kana ini ndinofunga kudaro?
Yep, ini ndinoshandisa iyo Ubuntu font .. Sezvo yekutanga vhezheni yakabuda. 😀
Iwe uchave uine chinyorwa pamusoro pehurukuro yako? Ndakaona zvakare kuti inotonhorera!
Kana iwe uchireva iyo XFCE musoro, unogona kutsvaga nechekuno.
Eddy Ernesto del Valle Pino akadaro
Hehe .. pandino dhonza hwindo kune rimwe divi rekona, ini ndinowanzo zviita kuti riendese kune rinotevera desktop izvi zvicharamba zvichindishandira here ini pandinoisa iyo Snap
Pindura Eddy Ernesto del Valle Pino
Icho chaicho chinhu chiri kukurukurwa pane iyo Xfce runyorwa. Mugadziri akandiudza chinhu chimwe chete ichocho, kuti kana uchishandisa zvinopfuura kamwe chete izvi zvinogona kuva dambudziko. Ini ndakakurudzira kuti iwedzerwe senge sarudzo, kuti iitwe kana kudzimwa sezvinoitwa nemushandisi. Mumwe munhu akataura kuti zvinogona kuitwa nenguva mumamiriseconds, ndiko kuti, kana hwindo rasvika kumucheto, basa iri harizoitwe kwekanguva.Asi hapana, zvese zvinokurukurwa izvozvi.
Ini ndinayo uye ndinogona kupfuudza mahwindo kune mamwe madhesiki, ini ndinongo fanirwa kuidhonza zvishoma kudivi kune imwe desktop, handizive kuti ichazvibata sei kuipfuudza kune vamwe vatariri.
Nyaya ye "tiling" yakatomuka kare kare pachikumbiro chevamwe vashandisi. Muchokwadi, muXfce wiki zvinoita sechinhu chekuwedzera che4.10. Nekudaro, ivo vanogadzira havana kukwanisa kusangana nemisi yakatarwa, saka zvinokwanisika kuti vaisiye iyo 4.12. Tichaona (kunze kwekunge paine zvimwe zvinononoka) munaKurume wegore rino.
Pindura kuna Cryotopo
Ehe hongu, nyaya yacho iri kutofamba pane runyorwa rwevanogadzira. Ngatione kuti zvinopera sei. Dzimwe nguva ndinowana kunzwa kwekuti Xfce programmers havade kuchinja zvakanyanya kana kubvuma shanduko nyowani. Kwavari zvese zvinoita kunge zvisina basa.
Chinja izvo zvinonzi shanduka, havadi chero chinhu. Semuenzaniso, mune tambo pane yekumisikidza 'tsamba yekutumira, mukana wekuwedzera matabhu kuThunar wakakurukurwa uye mhinduro yacho yaive yakawiriranwa zvisina kunaka naJanis Pohlman nekambani, zvichipomera matambudziko nekugadzirisa kwayo.
Chokwadi ndechekuti dzimwe nguva ini handizive zvekufunga nezve vanogadzira ... izvozvi ichokwadi kuti vari kuchinja dhizaini yemukati yeXfce yakawanda (xfconf, libxfceui4 kutsiva libxfcegui4, GIO, nezvimwewo) kutsvaga kutsamira zvishoma sezvinobvira pamaraibhurari eGnome uye GTK chete. Muchokwadi muna 4.8 basa raitwa "hafu" uye vanoedza kuripedza muna 4.10.
Uye sekutaura kwavo ivo pachavo, kune vashoma vashanduri vanochengeta nharaunda, vanhu vakakosha vasiya, vashoma vakawedzerwa uye vamwe vakaita saPohlman vambotaurwa vakawana mabasa mu "chaiye" nyika inoganhurira nguva yavanogona kupa.
Kunyangwe zvakadaro, maitiro ake anoratidzika kunge asingachinjiki kwandiri.
Ichokwadi, ini ndakatora chikamu muhurukuro iyoyo. Ivo vanosimbirira kusa nyorazve Thunar, kana kuwedzera tabo kwairi pasi pekuti vangarasikirwa neyakareruka. Ini ndinofunga zviri nani nekuti havadi. Pamwe chikonzero chekuti vane vashoma vashanduri ndechekuti chete, kuti havandibvumidze kuwedzera zvinhu zvitsva.
Chinhu chinonakidza ndechekuti Oliver Fourdan, iye musiki weXfce haatore chikamu mune izvi zvinhu. Zvinoita sekunge Janis Pohlman ndiye aive mutungamiri, uyo anoita sarudzo pamusoro pekupfeka uye chekusapfeka ... Hazvishamise sei?
PS: Haisi yekukubiridzira asi bhurogu yako ndeimwe yezvishoma zvinonakidza munyika yelinux. Kwaziso (iyo yandinogara ndichikanganwa kutaura kwaziso) kubva kuIberian Peninsula.
Ndatenda nekutaura kwako, iwe unotibatisa chokwadi.Ndinovimba unonzwa zvakanaka pano, semhuri.
Kwaziso kubva kumwe kunhu mune yechitatu nyika hahaha ..
XFCE & LXDE KUSHANDISA KUSHANDISA